राजनीतिक भेला पनि बन्द गर – KarnaliPost Daily
राजनीतिक भेला पनि बन्द गर
२६ पुष २०७८, सोमबार १२:२१ January 14, 2022 by Karnali Post Daily
जुम्ला । नेपालमा फेरी कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेको छ । केहि दिनयता संक्रमणदर ह्वात्तै बढेपछि नागरिक फेरी त्रासमा परेका छन् । संक्रमणको जोखिम हाम्रै लापबारहिले बढेको हो । संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउने सजकता थुप्रै छन् । तर पनि विगतकै जस्तो नेपाल सरकारले संक्रमण बढेको भन्दै रोकथामका लागि भनेर फेरी पुस २७ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मन्त्रालयमा सोमबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा बचावटको विषयलाई विशेष ध्यान दिँदै देशभरका सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरुमा वार्षिक विदामा मिलान हुनेगरी पुस २७ देखि माघ १५ गतेसम्म विदा दिने निर्णय हो । सो अवधिमा १२ देखि १७ वर्ष उमेरका विद्यार्थीहरुलाई नजिकैको खोप केन्द्रमा गई कोभिड विरुद्धको खोप लगाईने छ ।
पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रलाई पुर्ण धरासयी भएको कुरा जगजाएरनै छ । तर पनि सरकार फेरी शिक्षा क्षेत्रलाई संक्रमण रोक्ने पहिलो अस्त्रका रुपमा हेर्नु गलत हो । चिसोका कारण तराइका केहि जिल्ला र हिमाली जिल्लाको पठपाठन बन्द छ । तर सरकारले आगामी माघ १५ गते सम्म विद्यालय बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयले नेपालभरीकै शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ । के विद्यालय मात्रै बन्द गर्दा कोरोना संक्रमण घट्छ त ? देशभरी भइरहेका राजनीतिक भेला जमघट संक्रमण बढ्नुका कारण हैनन् ? के राजनीतिक भेला रोक्नु पर्दैन ? यस्ता प्रश्न यतिबेला रहेक नेपालीको मनमा छ ।
तेस्रो लहरको कोरोना फैलिनुका विभिन्न कारण मध्य मुख्यकारण नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले, माओबादी केन्द्र र रापप्राको अधिबेश पनि एक हो । संक्रमण बढ्यो भनेर विद्यालय बन्दको निर्णय भइरहँदा देशभर नेकपा एमालेको जिल्ला अधिबेशन चलेको छ । अन्य दलहरुका राजनीतिक कार्यक्रम उस्तै बढेका छन् । संक्रमण रोक्ने एउटै उपाय भनेको जमघट भेला कम गर्नु हो । तर सरकारको आँखा सिधै विद्यालय क्षेत्रमा मात्रै जानु भन्दा राजनीतिक भेला जमघटलाई रोक्ने तर्फमा जानु पर्छ । नेता र जनताको ज्यान जोगिए राजनीति आज नभए भोली अबश्य हुन्छ ।
तर गाउँगाउमा भइरहेका पार्टी प्रबेश लगायतका अन्य कार्यक्रमले संक्रमणको जोखिम बढाएको छ । त्यसैले सरकारले तत्काल सर्वदलिय बैठकको आयोजना गरी आ आफ्ना पार्टीका भेला जमघट रोक्नका लागि जिल्लामा निर्देशन पठाउने वाताबरण सृजना गर्न आबश्यक छ । अन्यथा विद्यालय बन्द गर्दैमा उद्योग कलकारखाना व्यवसाय बन्द गर्दैमा संक्रमण रोकिन्छ भन्ने भ्रम मात्र हो । यस्ता विषयमा तीनै तहका सरकारको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
तेस्रो लहरको कोभिड रोकथाम पूर्वतयारीमा जुटौँ संघर्षसील रण बहादुर,‘जो बाबा आमाको प्रेरणा र आफ्नै मेहेनतले निजामती भए’ ‘मेरो रातो’पुस्तक,समाज बदल्ने अस्त्र होःछात्रा पराजुली राष्ट्रसेबक बुढाकाे नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव ! माओवादी जनयुद्ध र मेरो परिबारको कहालीलाग्दो बेदना !